About Us - I-Xinhong Mech ne-Elec Co, Ltd.
Amaski Ubuso besendlalelo
Isungulwe ngonyaka we-2002, iXinhong Group yahlela kabusha futhi yandisa ukusebenza kwayo ngonyaka we-2011, igxile ocwaningweni nasekuthuthukiseni, ekuqhubekeni nasekuphakanyisweni kwemishini yokudlulisela ukushisa yeminyaka engu-18. I-Xinhong Group ithole isitifiketi sokulawulwa kwekhwalithi ye-ISO9001, ISO14000, OHSAS18001 ngemikhiqizo ye-CE (EMC, LVD, MD, RoHS), futhi ithole nenqwaba yamalungelo obunikazi asekhaya nawangaphandle. Iqembu leXinhong lisekela ifilosofi yebhizinisi yekhasimende kuqala, yemukela ushintsho, ukusebenzisana, uthando, ubuqotho nokuzinikela. Suka ezidingweni zamakhasimende, sinamathela esimweni sokusebenza kwamakhasimende kangcono, futhi sizimisele ukwenza imikhiqizo futhi sithuthukise ulwazi lomsebenzisi, ngakho-ke amaqembu abanzi wamakhasimende ayojabulela imikhiqizo esezingeni eliphakeme, eqinile, futhi engabizi. Imikhiqizo eklanywe yiXinhong Group ihlose ukusebenza ngamaqembu amakhasimende amahlanu. I-Xinhong Group imema ngobuqotho iningi labalingani bobuchwepheshe ukuba bahlanganyele, futhi ingenise imikhiqizo eminingi ye-Xinhong ezweni layo ukuze abathengi abaningi babelane ngemishini esezingeni eliphakeme futhi engabizi!
● Ubuciko nokuzilibazisa
Lolu chungechunge luhlanganisa i-EasyPress 2, i-EasyPress 3 neMugPress Mate, abakhonza ubuciko kanye nabathandi bezandla. Abasebenzisi bangasebenzisa umshini wokubhala we-mini ndawonye. Ubuciko i-DIY ilungele ukuhlakulela amakhono omuntu, ngezifiso izipho ngokufanayo ukuqinisa ubungani phakathi kwabangane nokukhuthaza ukuvumelana komndeni
Lolu chungechunge lwemikhiqizo lubandakanya imishini eyisisekelo, kufaka phakathi umshini wokudlulisa ukushisa, umshini wokucindezela izinkomishi, umshini wokuphrinta we-cap, iphrinta yepeni, iphrinta yebhola, umshini wokushicilela izicathulo, njll. Lawa madivayisi ahlangabezana nokwenza ngokwezifiso eziyisisekelo nokwaziwa kwe-DIY kokudala, futhi kusebenza kakhulu kwimikhiqizo okufana nokucekelwa phansi, ukuthunyelwa okushisayo, i-vinyl yokudlulisa ukushisa, ama-rhinestones nokunye. Abasebenzisi bangathenga amaphrinta afana ne-EPSON neRicoh ukufezekisa ukuthunyelwa okuncane kanye nokudluliselwa okushisayo, noma bathenge isisekelo sokusika isixhobo ukufanisa ne-vinyl yokudlulisa ukushisa (HTV), esetshenziswa kabanzi ezingutsheni, okokusebenza kwezemidlalo, okokwenza ngezifiso izipho, njll.
● I-Professional Customization Office noma i-Production
Lolu chungechunge lwemikhiqizo lukhonza amafektri wokulungisa ngobuchwepheshe neziteshi zokuzenzela zokugqoka I-Innovation Tech ™ Series inengcindezi enkulu futhi efanayo (UMax. 450kg), izinga lokushisa elingalingani (± 2 ° C), nesifo sohlangothi olukhulu (Max.6cm). Iguqulwe ngokuphelele ngezinto ezifanele ezisetshenziswayo eziphezulu futhi ezinengcindezi ephezulu njenge-ATT, i-Forever laser yokudlulisa iphepha, izinto eziqondile zokulawula izinga lokushisa ezifana ne-TPU, nokudluliswa okudinga ingcindezi efanayo, njengeCh Panaluxe Aluminium Panels
● I-Professional Textile noma Umkhakha Wokukhangisa
Ball Ipeni Heat Cindezela Umshini , Heat Cindezela Ukuze Pens , Heat Cindezela Ipeni Iphrinta , Small Ilebula Heat Cindezela Umshini , Ball Heat Cindezela Umshini , Heat Cindezela Amalebula ,